ရီးယာ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ရီးယာ သည် စနေဂြိုဟ်၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်းတွင် နဝမမြောက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် စီးရီးစ် ဂြိုဟ်သိမ်ပြီးလျင် ဒုတိယအသေးငယ်ဆုံး အရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ရီးယာအား Giovanni Domenico Cassini ဆိုသူက ၁၆၇၂ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
7021230651800000000♠(2.306518±0.000353)×1021 kg  (~3.9×10−၄ Earths)
↑ ၁.၀ ၁.၁ Rhea: Saturn's dirty snowball moon
↑ ၃.၀ ၃.၁ Roatsch၊ T.; Jaumann၊ R.; Stephan၊ K.; Thomas၊ P. C. (2009)။ "Cartographic Mapping of the Icy Satellites Using ISS and VIMS Data"။ Saturn from Cassini-Huygens။ pp. 763–781။ doi:10.1007/978-1-4020-9217-6_24။ ISBN 978-1-4020-9216-9။
↑ "Saturn's satellite Rhea isahomogeneous mix of rock and ice" (2007). Geophysical Research Letters 34 (2). doi:10.1029/2006GL028100. Bibcode: 2007GeoRL..34.2202A.
↑ Emily Lakdawalla (12 November 2015)။ DPS 2015: First reconnaissance of Ceres by Dawn။ The Planetary Society။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရီးယာ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=477617" မှ ရယူရန်
၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။